मेलेम्ची आयोजनाको ३४० बोरा अर्घाँखाची सिमेन्ट बाटोबाटै गायब | Citizen Post News
सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध निर्माणको लागि ल्याएको ३ सय ४० बोरा अर्घाँखाची सिमेन्ट विच बाटोबाटै गायब पारिएको छ । ३ सय ४० बोरा सिमेन्ट चोरीपछि विक्री गरेको काण्डलाई सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले समेत गुपचुप पारेको छ । असोज २ गते बाँध निर्माणका लागि ना ५ ख १०२७ नम्बरको दश चक्के ट्रकमा सो परिमाणको सिमेन्ट ल्याइएको थियो । काठमाडौंबाट अम्बाथानका लागि आएको उक्त सिमेन्ट राति ११ बजे अम्बाथान पुग्यो तर सिमेन्ट नझारी फर्कियो ।
त्यसपछि स्थानीयले उक्त ट्रक र चालकलाई निगरानीमा राखेका थिए । उता अम्बाथानको स्टोरमा कार्यारत छिरिङ दोर्जे लामालाई भने चालकले सिमेन्ट बुझेको सहिछाप लगाएको भेटिएको छ । स्टोरबाट करिब ११ किलोमिटर तल तालामाराङमा पुगेर उक्त ट्रकका चालकले त्यहाँको एक हार्डवेयर पसललाई सिमेन्ट विक्री गर्दै गरेको सूचना चुहिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोका डीएसपी तथा सूचना अधिकारी विमल कँडेलले ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कम्पनी (सीएससी) को त्यति ठूलो मात्रामा सिमेन्ट चोरी गरी विक्री गर्ने गिरोहका सदस्यहरु को–को माथि छानविन भयो ? पक्राउ परे ? त्यो भने प्रहरीले बताउन चाहेन । तर उक्त काण्डमा संलग्नमाथि सवैलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले बताएको छ । स्थानीयका अनुसार बाहुनेपाटीस्थित रहेको सुरुङ निर्माण कम्पनी (सीएमसी) को वेयरहाउस म्यानेजर दामोदर बस्यालको मिलेमतोमा उक्त सिमेन्ट विक्री भएको हो ।
स्थानीयले भने स्टोरका कर्मचारी छिरिङ दोर्जे, वेयरहाउसका म्यानेजर बस्याल, ट्रक चालक, हार्डवेयर पसलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुको संलग्नता विना ३ सय ४० बोरा सिमेन्ट विक्री हुनै नसक्ने स्थानीयको भनाई छ । असोज २ गतेको उक्त काण्डलाई प्रहरीले गुपचुप राख्न खोजेको समेत उनीहरुको आरोप छ ।